Imbali yoMbane weFeksi - u-Alexander Bain
Imbali yeFeksi yoMshini
U-Alexander Bain wathola ilungelo lobunikazi bokuqala ngomshishini wefekisi ngo-1843.
Ukufeksi okanye ukuthumela ifeksi ngenkcazo yendlela yokwenza idifodata, ukuyithumela ngomgca wefowuni okanye ukusasazwa ngomsasazo, nokufumana ikopi enzima yombhalo, imidwebo yemigca, okanye iifoto kwindawo ekude.
I-teknoloji yamashishini wefeksi yaqulunqwa ixesha elide, nangona kunjalo, imishini yefeksi ayizange ithandwe ngabathengi kude kube ngama-1980.
Umshishini wokuqala wefeksi wasungulwa ngumatshini waseScotland kunye nomqambi uAlexander Bain.
Ngo-1843, u-Alexander Bain wathola ilungelo lobunikazi baseBrithani ngokuba "uphuculo lokuvelisa nokulawula umbane wamanzi kunye nophuculo lwamaxesha amashishini kunye nokunyathelisa ugesi kunye ne-signalgraph".
Kwiminyaka embalwa ngaphambili, uSamuel Morse wayesebenzisa umshini wokuqala wee-telegraph ophumelelayo kwaye umshishini wefeksi wawuguquke kakhulu kwi-teknoloji ye- telegraph .
Umshini we-telegraph wangaphambili wathumela ikhowudi yokuziphatha (amachaphaza kunye neentlanzi) phezu kweefowuni ze-telegraph ezichazwe kumyalezo wesicatshulwa kwindawo ekude.
Ngakumbi malunga no-Alexander Bain
UBain wayengumfilosofi waseScotland kunye nomfundi esikolweni saseBrithani sokukhwabanisa kunye nomntu obalaseleyo novelisayo kwiinkalo zengqondo, iilwimi, ingqiqo, ifilosofi yokuziphatha kunye nokuhlaziywa kwemfundo. Wayeka ingqondo , iphephancwadi yokuqala ye-psychology kunye nefilosofi yokuhlalutya, kwaye yayingumntu okhokelayo ekusekeni nasekusebenziseni indlela yesayensi kwizengqondo.
I-Bain yayiyiNgqungquthela yeSihlalo seRegius kwi-Logic kunye noNjingalwazi we-Logic kwiYunivesithi yase-Aberdeen, apho naye wayebambe i-Professorships kwi-Moral Philosophy kunye neeNgesi zoLwimi kwaye wayekhethwa kabini uMlawuli weNkosi.
Umshini Wase-Alexandre Bain Wasebenza?
Umthumeli womshishini wefeksi waseAlexander Bain wanikezela isicatshulwa esicatyambo ngokusebenzisa ipenethi ephakanyiswe kwi-pendulum.
Isimboli sithatha imifanekiso kwi-metal surface. Umenzi wewashi e-amateur, u-Alexander Bain wadibanisa iinxalenye ezisuka kwiinkqubo zee-clock kunye nemishini ye-telegraph ukudala umshini wakhe wefeksi.
Abaqambi abaninzi emva koAlexander Bain, basebenze nzima ekuquluneni nasekuphuculeni izixhobo zohlobo lweefeksi:
Ngomnyaka we-1850, umqambi waseLondon ogama lakhe linguClake Blakewell wathola ilungelo lobunikazi into awabiza ngokuthi "ukukopisha i-telegraph".
Ngowe-1860, umshishini wefekthi obizwa ngePelegragraph wathumela ifeksi yokuqala phakathi kweParis neLyon. I-Pantelegraph yasungulwa nguGiovanni Caselli.
Ngomnyaka we-1895, u-Ernest Hummel wayengumlindi ovela eSt. Paul, eMinnesota waqulunqa isixhobo sakhe esinobuchule esibizwa ngokuba yiTelediagraph.
Ngomnyaka we-1902, uDkt. Arthur Korn wasungula ifeksi ephuculweyo nesebenzayo, i-photoelectric system.
Ngo-1914, u-Edouard Belin wasungula umxholo wefeksi ekude yesithombe kunye nokubika kweendaba.
Ngomnyaka we-1924, umatshini we-telephotography (uhlobo lomshishini wefeksi) wasetyenziselwa ukuthumela iifoto zendibano zezopolitiko ixesha elide kumaphephandaba. Yayilungiswa yi-American Telephone & Telegraph Inkampani (AT & T) yakwenza ukuphucula iteknoloji yefeksi.
Ngowe-1926, i-RCA yasungula i-Radiophoto eyithunyelwa ngefeksi ngokusebenzisa iteknoloji yokusasazwa kwezesasazo.
Ngo-1947, uAlexander Muirhead waqulunqa umbane wefeksi ophumeleleyo.
Ngo-Matshi 4, 1955, ukuthunyelwa kwefeksi yokuqala kwithunyelwa kwilizwekazi.
Ubani Ohlaba Usuku Lukabawo?
Ngubani owasungula iKholeji yoNyulo?
Ukufaka Iqoqo Eliqilileyo Ukuzisa Kwiihambo Zakho eKayaking
Abantu baseMerika bavakalelwa njani malunga nokubuyiselwa kwempahla?
Ubomi kunye nelifa lika-Aristotle
I-Cucumbertree, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
Ngaba iinjubhu zabulala i-Dinosaurs?
Ukuqonda i-Gali ye-Salivary ne-Saliva
Ukuqonda iiSolestic kunye nee-Equinoxes
Yintoni iSikole saseMontessori?
I-Top 10 Santana Iingoma
IWimpy Kid Movie Diary